မျက်စိစွေခြင်း | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Health & Fitness » မျက်စိစွေခြင်း	19
wintpyone myint has written 21 post in this blog.
မိဘပေးခဲ့တဲ့ နာမည် ၀င့်ပြုံး ။ ၀င့်ဝါခြင်းသဘောကို မဆောင်၊ အောင်နိုင်သူ့အပြုံး (Triumphant Smile) လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေမယ့် လူကတော့ အရှုံးသမားတစ်ဦးသာ ဖြစ်ခဲ့။ ( I am nothing butaloser.)
အလင်းဆက် says: ထူးခြားတောက်ပနေတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ရှေ့အနာဂတ်မှာ လူသားရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းမယ့်ကိစ္စ တစ်ခုတလေတောင် မလုပ်မိဖို့၊ …..
အလင်းဆက် says: ၀ိုးးးးးးးးးးးးးးးး
ကထူးဆန်း says: ဆရာမရေ .. အခုလို ဆရာမရဲ့ သမီးလေး ကောင်းသွားတာသိရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ။ ဆရာမ ဂဇက် နဲ့ တစ်လ နဲ့ ဆယ်ရက် ဝေးသွားတယ် ဆိုလို့ ဒီပိုစ် နှစ်ခု မဖတ်ရသေးဘူးဆိုရင် ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်..
မောင်ပေ says: ဆရာမရေ
pooch says: မပြုံးရေ ကလေးက အကောင်းတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတော့ ၀မ်းသာစရာပါပဲ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကိုထူးဆန်းရေ လင့်ခ်တွေပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။ အခုလေးတင်ပဲ ဖတ်လို့ ပြီးသွားပါတယ်။
မောင်ပေ says: အခုလို ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျို့ 
the best says: နှုတ်ခမ်းကွဲ တဲ့ကလေးတွေကို စီမံချက်နဲ့ကုသပေးသလို
ကိုခင်ခ says: 3D မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း ခွဲစိတ်မှု့အောင်မြင်ပြီး မျက်လုံးအကောင်းအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားတာကလည်း ၀မ်းသာစရာပါ ဆရာမရယ်။
MaMa says: မပြုံးရဲ့ စာကိုဖတ်ရလို့ မျက်စိစွေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စောစောကုသမှုခံယူသင့်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ (ဆရာဝန်၊ ဆေးဝန်ထမ်းတွေကလွဲရင်) ကျန်းမာရေးအသိ အလွန်နည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုလို ဆရာမရဲ့ကိုယ်တွေ့ကို ဖတ်ရတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ရင် တွေ့ရင် လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တာမို့ အကျိုးများလှပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3246
weiwei says: ကျွန်မ မောင်လေးတုန်းက အသက် ၁၁ နှစ်မှာမှ ဆရာဝန်နဲ့ပြဖြစ်ခဲ့လို့ ခွဲစိတ်ဖို့ နောက်ကျသွားပါတယ် … မျက်လုံးတစ်ဖက်က အခြေအနေတော်တော်ဆိုးပြီး ၀ါးတားတားပဲမြင်ရလို့ သူ့ကို ကားမောင်းခွင့် (လုံးဝ) မပေးခဲ့ဘူး … အခု အသက် ၃၀ ကျော်ချိန်မှာ အမြင်အာရုံက အရင်ကလောက် မဆိုးတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ် … အခုကလေးတွေလက်ထက်မှာတော့ သူငယ်တန်းလောက်အရွယ်ကထဲက မျက်စိအခြေအနေမကောင်းဘူးထင်တာနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆုံးပြဖြစ်ပါတယ် …
မှော်ဆရာ says: ကျမ်းမာရေး အသိပညာပေးတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ .. အရင်ကဆို သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး . ခုတော့ ကလေးအဖေ ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ကို့ကလေးသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဖတ်ဖြစ်တယ် ..။ ခွဲစိတ်လို့ရတာလဲ အရင်က မသိခဲ့ဘူး ..။ တခြား ကံမကောင်းတဲ့ ကလေးတွေကို ပြန်ပြောပြလို့ ရသွားပြီး ..ကျေးဇူးပါ ..။
kyeemite says: အသိဥာဏ် အခရာကျတဲ့ခေတ်မှာ လူသားတန်ဖိုးဟာလည်း တန်ကြေးကြီးလာတယ်။ လူသားရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာလည်း မြင့်မားလာတယ်။ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲ ထူးခြားတောက်ပနေတဲ့ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ရှေ့အနာဂတ်မှာ လူသားရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းမယ့်ကိစ္စ တစ်ခုတလေတောင် မလုပ်မိဖို့၊ ကျွန်မလို မပေါ့ဆမိကြဖို့
Tin Tin says: မပြုံးရေ… မျက်စိစွေတာကို စောစောခွဲစိတ်ပြီးကုရင် ကောင်းတယ်ဆိုတာသိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
char too lan says: ကျေးဇူးပါ တီတီပြုံး ကျနော်မှတ်သားကူးယူသွားပါတယ်
surmi says: ဆရာမရေ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2739
ဦးဦးပါလေရာ says: ဒါကတော့ မ၀င်းပြုံးမြင့်က ဆရာဝန်ကောင်းနဲ့ တန်းတိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
မိုး မင်းသား says: ကလေးလည်း.နေကောင်းပြီဆိုတာ သိရလိ်ု့ဝမ်းသာပါတယ်။
ကြောင်ကြီး says: များသောအားဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အများစုကို စစ်ကြည့်ရင် မျက်မှန်တပ်ရမည့်သူများတယ်၊ သို့သော် စာသိပ်မဖတ်တာရယ်၊ အလုပ်ထဲမှာ မျက်လုံးသိပ်မသုံးတာရယ်ကြောင့် ဘာသိဘာသာ နေကြတာများတယ်။ သိပ်မလိုအပ်ဘဲ ရှိုးအပျက် မခံချင်ကြဘူးပေါ့လေ…
Comments By Postနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - parlayar 46 - padonmarငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - အလင်း ဆက် - padauk moeသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - ko pauk mandalayမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - အလင်း ဆက် - Ma Maအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - padonmar - Ma Maကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - အလင်း ဆက် - TNAမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - padonmar - ko pauk mandalayမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - အလင်း ဆက် - TheWinner Getprizeအတ္တဆန် - အလင်း ဆက် - padonmarလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - Ma Maယုံလား? - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်မင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moePassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - Ma Ma - TNAနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - padauk moe - TNAပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်းမှ..... - မောင် ပေစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - မောင် ပေ - Mobile13ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - TNA - မောင် ပေbin bo..........(ဘင်ဘို) - TNA - အလင်း ဆက်“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities